:: My Little World ::: August 2007
Jim Carrey: Support Aung San Suu Kyi
In New YouTube Video Hollywood Star Urges People to Join US Campaign for Burma and Human Rights Action Center
Source : uscampaignforburma.org
Posted by Nay Nay Naing at 8/29/2007 09:33:00 PM 1 comments
ဒီနေ့Website တွေမှာ သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Tutorial အများအပြားကို စုပေးထားတဲ့ နေရာတစ်ခုကို တွေ့ ရတယ်။ Advanced Adobe Photoshop Tutorials တွေလို့ပြောထားပါတယ်။ Adobe Photoshop ကို အသုံးပြုနေသူတွေ၊ အသုံးပြုတတ်သူတွေ အတွက် အဲ့ဒီက Tutorial Links တွေက အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်ဆို Graphic Design လုပ်တာတွေမပြောနဲ့Photo Editing လုပ်တယ် ဆိုတာတောင် ကျွန်မနဲ့အတော့်ကို အလှမ်းဝေးတဲ့ အရာလို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ Photoshop Software ကို Beginner User Level အဆင့်တောင် မသုံးတတ်ပါဘူး။ ဟိုအရင်ကတော့ Photoshop ကို ကွန်ပြူတာထဲမှာ သွင်းထား ဖြစ်သေးတယ်။ Photo တွေကို ပြင်ရမယ်ဆို Resize လုပ်တာရယ်၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပိုင်းလေးကို Crop လုပ်ယူတာရယ်၊ Colour တွေကို လျှောက်ပြောင်းတာရယ်ကလွဲရင် ကျန်တာ ဘာမှမတတ်တဲ့ ကျွန်မအဖို့Photoshop Software က မလိုအပ်ဘဲ၊ အပိုဖြစ်နေတာကြောင့် နောက်ပိုင်းတော့ Install တောင် မလုပ်ထားဖြစ်တော့ဘူး။ ကျွန်မ တတ်တာတွေလုပ်ဖို့ကလည်း Paint တို့ ၊ Microsoft Photo Editor တို့Free ရတဲ့ Google က Picasa တို့ လောက်ကို သုံးပြီးလည်း လုပ်လို့ ရနေတယ်လေ။ ကိုယ်ကသာ ဘာမှ မလုပ်တတ်တာ၊ တခြားသူတွေ လုပ်ထားတဲ့ Design လှလှလေးတွေနဲ့လှနေတဲ့ ပုံလေးတွေကိုတော့ သဘောကျ၊ နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။
Photoshop Software ကို စမ်းသုံးကြည့်မယ်၊ ပုံလေးတွေ ပြင်ကြည့်မယ် စိတ်ကူးတာ အတော်ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် ခုထိတော့ တစ်ခါမှာကို အကောင်အထည် ဖော်ပြီး အလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ တစ်နေ့ နေ့ တော့ အသုံးဝင်လာမယ် ထင်တာတဲ့ ဒီ Tutorlas တွေစုထားတဲ့ Link ကို မှတ်ထားလိုက်တယ်။
Credit to http://www.dennisplucinik.com/
Posted by Nay Nay Naing at 8/29/2007 04:18:00 PM 1 comments
ခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ်။
အလုပ်မှာလည်း ရှုပ်နေသလို၊ ကျန်တဲ့အချိန်ကြတော့လည်း အသက်ရှင်ဖို့မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ နေထိုင်၊ စားသောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ်ဟာကိုယ် ရှုပ်ရှက်ခက်နေတယ် ဆိုရမယ်။ အလုပ်မှာ နည်းနည်း အားတဲ့ အချိန်တွေကြတော့ အင်တာနက်ပေါ်က မြန်မာပြည်အကြောင်း သတင်းတွေကို လိုက်ရှာ ဖတ်နေရတာနဲ့တခြားဟာတွေ လုပ်ဖို့အချိန် မရှိတော့ ပါဘူး။ အလုပ်တွေ အားလုံးပြီးလို့အိမ်ကို ပြန်ရောက်ချိန်ကြတော့ တနေကုန် စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်း ဖြစ်လာလို့ ထင်ပါတယ်၊ တခြား ကိစ္စတွေကို လုပ်ဖို့စိတ်မပါတော့ဘူး။ ဒီရက်ပိုင်း အရင် ပုံမှန်လုပ်နေကြ အလုပ်တွေထဲက လုပ်ဖြစ်နေတာဆိုလို့့... အလုပ်လုပ်ရင်း သီချင်းနားထောင်၊ လမ်းသွားရင်း စာအုပ်တချို့ ဖတ်တာလောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။
အလုပ်ရှုပ်၊ လူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်း ဖြစ်နေရတဲ့ နေ့ တွေ ပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 8/29/2007 01:00:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/25/2007 09:32:00 AM0comments
ဘ၀မှာ အဓိက ပြောင်းလဲခြင်း နှစ်ခုပဲရှိတယ်..
ကိုယ် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အရာတွေကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့ .....
ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲလိုက်ရခြင်း ...
ကျွန်မ အတွေ့ အကြုံအရတော့ ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာ လုပ်ဖို့အတော်ခက်ခဲတယ်..
ဘယ်လောက်ခက်ခဲပါစေ... တကယ် လိုအပ်လာရင်တော့ ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်ရမှာပေါ့....
Posted by Nay Nay Naing at 8/23/2007 03:06:00 AM0comments
ဒီနေ့အင်တာနက်ပေါ်က မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတချို့ ကို ဖတ်ရင်း၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို၊ တချိန်တည်းမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တိုးတိုးလေး ကြားယောင်လာသလိုပဲ။ ဒီလိုတွေ မဖြစ်လာပါစေနဲ့ လို့စိတ်က တိတ်တခိုး ဆုတောင်းနေမိပေမယ့် ဒီလိုပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို သိနေခဲ့တယ်။ ဒီစစ်အစိုးရက ဟိုးအရင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာမှာလည်း ဒီလိုနည်းကိုသုံးလို့ဖြေရှင်းနေကျပဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင် ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် တို့ နဲ့ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တချို့ ကတော့ အဲဒီဧည့်ဆိုးတွေခေါ်ဆောင်ချင်းကို ခံလိုက်ရပြီတဲ့။ ကိုထင်ကျော်နဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တချို့ ကတော့ ဒီဧည့်ဆိုးတွေ လက်က ရှောင်တိမ်း နေနိုင်တုန်းပဲတဲ့။ Mizzima (Breaking News) ကသတင်းအရကတော့ ကိုကိုကြီး ကိုလည်း ဧည့်ဆိုးတွေ လာခေါ်သွားတာမှာ ပါသွားတယ် ဆိုထားပေမယ့်၊ DVB သတင်းမှာတော့ ကိုကိုကြီး က ဧည့်ဆိုးတွေလက်က ရှောင်တိမ်းနေနိုင်ပြီး ကိုထင်ကျော်တို့ နဲ့ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတယ်တဲ့။ ခေါ်ဆောင်ရာ လိုက်ပါသွားရတဲ့ သူတွေကို ဘယ်တော့များမှ ပြန်လွှတ်မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူ သိနိုင်မှာလဲ။ ဟင်း.. ကိုကိုကြီး လွတ်မြောက်နေတုန်းပဲဆိုတဲ့ သတင်းမှန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပြီး .. နောက်ထပ် ဘယ်သူမှ ထပ်ပြီး သူတို့ ခေါ်ရာ လိုက်မသွားရပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းနေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေ လျှောက်စရာရှိတဲ့ လမ်းကို ဆက်လျှောက်နိုင်ကြပါစေ။
မွန်းအောင် - ဧည့်ဆိုး
အိမ်ရှေ့ မှာ ကားတစ်စီးရပ်ကာ တံခါးကို ဖွဖွခေါက်ကာ လမိုက်ညရဲ့ အို ဧည့်သည်
မမြင်ဖူးတဲ့ မျက်နှာစိမ်းရယ် ငါ့ကို စကားစကြတယ် ခနလောက် လိုက်ခဲ့ပါအုံးတဲ့...
လူ ...လူ... ဧည့်ဆိုး.. မကြုံချင်တဲ့ ဧည့်ဆိုး
လူ....လူ... ဧည့်ဆိုး.. မကြုံချင်တဲ့ ဧည့်ဆိုး
နွေရက်တွေ နှောင်းခဲ့ပေါ့ကွယ် ၀ဿန်တစ်ညရဲ့ မိုးဖွဲနဲ့ အတူ ဆောင်းတွင်းရက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်
ချစ်ဇနီးကို တမ်းတရင်းနဲ့ရင်သွေးရဲ့ ချစ်စရာ့ မျက်နှာ ငါ့မျက်စိထဲပေါ်ခဲ့တယ်
လူ....လူ... ဧည့်ဆိုးရဲ့ အကျဉ်းအိမ်ထဲ
[ Update: ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဇေယျ၊ ကျော်ကျော်ထွေး၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်၊ ကိုပဏ္ဏိထွန်း၊ ကိုဇော်ဇော်မင်း၊ ကိုသက်ဇော်နှင့် ကိုဥာဏ်လင်းထွန်း တို့ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ ဖော်ပြသည်။]
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ကျောင်းသာလူငယ် (၂၀) ခန့် အဖမ်းခံရ- ဒီဗွီဘီသတင်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ထိန်းသိမ်းခံရ - ခေတ်ပြိုင်သတင်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အဖမ်းခံရ - ဧရာဝတီသတင်း
Labels: Music, Myanmar, News
Posted by Nay Nay Naing at 8/22/2007 12:41:00 PM0comments
ဘာတွေ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါစေ...
အားမလျှော့နဲ့... နောက်မဆုတ်နဲ့ ... အရှုံးမပေးနဲ့...
You'vealong way.....
You sitll havealong way to go!!
And I'm sure you can achieve whatever you want!
Let the sky be your limit !!!
Posted by Nay Nay Naing at 8/21/2007 10:01:00 PM0comments
Weekend တုန်းက Digg.com ကနေတဆင့် ဖတ်ဖြစ်လိုက်တာလေးပါ။ Programming Languages တွေဟာ Cars တွေအနေနဲ့ရေးသားထားတာပါ။ တချို့ ဟာလေးတွေကို ဖတ်ပြီး အတော် သဘောကျမိတယ်။ ဒါလေးဖတ်ပြီး ကျွန်မ စီးဖူးတဲ့ ကားအတော်များများ အကြောင်း နဲ့အဲဒီထဲက အတိုင်းဆို ကျွန်မ လက်ရှိ အဓိက မောင်းနှင်နေရတဲ့ ကားက family station wagon လေးဖြစ်နေပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
C , C++, Java, C#, Ocaml, Haskell, Lisp, Prolog, Perl, Python, Smalltalk, Ruby, Erlang, Fortran, Cobol, Forth, Assembly Language, Eiffel, Mathematica တွေကို ရေးသားထားတာ ဖတ်ရတယ်။
ကျွန်မနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ Programming Languages တစ်ချို့ နဲ့နှစ်သက်တာ တချို့ ကိုသာ ပြန်ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ ရေးထားသမျှ Programming Languages တွေ အကြောင်းအကုန်လုံးကို ဖတ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ (If programming languages were cars...) ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ထပ်သွားကြည့်တော့ အဲဒီ ပိုစ့်ကိုရေးသားသူဟာ သူရဲ့ Link ကို Digg မှာ ဖော်ပြတာခံလိုက်ရပြီးနောက် အကြံဥာဏ်ပေးချက် အများအပြားရရှိတဲ့အတွက် ထပ်ထည့် ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဦးမယ်လို့ရေးထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/21/2007 11:03:00 AM2comments
The Sound Of Silence, Lyrics, Lyrics Analysis
Posted by Nay Nay Naing at 8/19/2007 08:16:00 AM2comments
Windows Live ID Web Authentication Release
Windows Live(TM) ID Web Authentication final version (1.0) ကို Release လုပ်လိုက်ကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ASP.NET, Ruby, Java, Perl, Python, PHP Programming Language တွေမှာ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ [Window Live ID, Window Live ID Team's Blog]
အရင်ကတော့ Microsoft Live ID တစ်ခုကို သုံးပြီး Microsoft ရဲ့ Websites နဲ့Services အတော်များများကို ၀င်လို့ ရတယ်။ ခုလို Live ID Authentication System ကို ထုတ်လုပ်ပြီဆိုတော့ နောက်ဆို အဲဒီ System ကို သုံးပြီး ရေးထားတဲ့ Website တိုင်းကို Live ID သုံးပြီး ၀င်လို့ ရတော့မယ်ပေါ့။ ဟိုတလောကတင် Google ကလည်း သူ့ ရဲ့ Gmail Account ကို သုံးပြီး Online Website အတော်များများမှာ ဈေးဝယ်နိုင်အောင် "Google CheckOut" ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ Microsoft ကလည်း အားကျမခံ သူ့ ရဲ့ Live ID ကိုသုံးပြီး တခြား Website တွေမှာ ၀င်နိုင်အောင် ကြိုးစားလာပြန်တယ်။ သူတို့ နဲ့ အပြိုင် နာမည်ကြီးတဲ့ Yahoo ကရော တခြား ထူးထူးခြားခြား ဘာလုပ်အုံးမလဲ မသိဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
နောက်ဆို IPhone က "IPhone is everything" ဆိုပြီး ကြော်ငြာခဲ့သလို ပုံစံလိုမျိုး .... ဒီ Free Email ID တစ်ခုရှိတာနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ အရာရာလုပ်လို့ ရနေပါပြီ လို့ကြော်ငြာနိုင်အောင်များ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်လာကြသလား ထင်ရတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/17/2007 06:33:00 PM0comments
ဒီနေ့ ဖတ်မိသမျှ - 16 August 2007
"ယောင်္ကျားစိတ်ဆိုတာ အခက်သား။ ကိုယ့်ဘက်က တရားတယ်လို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးကို သူများ ဘယ်လောက်တားတား လုပ်ပစ်လိုက်ရမှ ။ ပြီးမှ မှားသွားရင် တိတ်တိတ်ကြိတ်ခံတတ်တာမျိုး"
"ယောင်္ကျား တစ်ယောက်စီက စည်းစိမ်ချမ်းသာ နဲ့သုခကို မျှဝေခံစားပြီးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အဲ့ဒီ ယောင်္ကျားရဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုလည်း မျှဝေခံစားနိုင်ရမှာပေါ့။ လူတစ်ယောက်ကို စုံမက်ပြီး ပေါင်းသင်းတဲ့အခါ သူ့ ရဲ့အကောင်းတွေကို ကိုယ်ယူရသလို သူ့ ရဲ့ အဆိုးတွေကိုလည်း ကိုယ်ယူရမယ် မဟုတ်လား။ တစ်ဖက်သတ်ကြီး ဘယ်ရပါ့မလဲ။ "
ဂျူး - ကျွန်မချစ်သောယောက်ျားများ ၀တ္ထုတိုမှ..
Posted by Nay Nay Naing at 8/17/2007 09:22:00 AM4comments
ဒီသီချင်းကို စပြီး ထွက်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေ ပို့ ပေးလို့နားထောင်ဖြစ်တဲ့။ Avril Lavigne ကချောတယ်၊ ဒီသီချင်းလေးက မြူးတယ် ဆိုတာလောက်ကလွဲရင် အရမ်းကြိုက်တယ်လည်း ၊ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သိတဲ့သူတွေထဲမှာ ဒီသီချင်းကို နားထောင်ပြီးတာနဲ့အရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုသူတွေ ရှိသလို၊ လုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ အရမ်းအမြင်ကပ်တယ် ဆိုလာသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို ကြိုက်တယ်ပြောသူ အများစုဟာ ယောက်ျားလေးတွေ၊ မနှစ်သက်သူတွေ အများစုဟာ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အထူးပြောစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က "Avril Lavigne - Girlfriend"သီချင်းလေး လိုချင်တယ် ပြောတာနဲ့mp3 ကိုပြန်ရှာ၊ ပို့ ပေးရင် ထပ်နားထောင်ဖြစ်ရုံမက၊ MTV ကိုပါ YouTube မှာ သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။
Avril Lavigne - Girlfriend(MTV)
ဒီသီချင်းထဲက ကောင်မလေးလို ... သူတပါးမှာ ချစ်သူရည်းစား၊ သက်ဆိုင်သူရှိမှန်း သိရဲ့နဲ့ရှေ့ ဆက်တိုးပြီး ကိုယ့်ဘက် ပါလာအောင် လုပ်တဲ့ လူမျိုးတွေထက်စာရင် အဲ့ဒီထဲက သရုပ်ဆောင် ကောင်လေးပုံစံမျိုး ကိုယ့်မှာ သက်ဆိုင်သူ ရှိရဲ့နဲ့တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ စွဲဆောင် ဖျားယောင်းမှုကြောင့် အလွယ်တကူ ဖောက်ပြန်သွားတဲ့ လူစားတွေကို ပိုပြီး စိတ်ကုန်မိတယ်။ (ကိုယ်ဟာကို ဖောက်ပြန်ချင်လို့အကြောင်းရှာ ဖောက်ပြန်ထက် လူမျိုးထက်စာရင် ခုလို စိတ်မခိုင်လို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သူတွေက ပိုပြီး စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်)
ကိုယ်လိုချင်တာ တစ်ခုကို ဘာအတားအဆီးပဲ ရှိရှိ ရအောင် ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုတော့ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပဲလေ။ မသိလို့ လုပ်တဲ့သူတွေမှ မဟုတ်တာ၊ သိလျက်နဲ့လုပ်နေကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ဖျားယောင်း သွေးဆောင်မှုကြောင့် လက်ရှိ တည်ရှိနေတဲ့ Relationship တစ်ခုကို အလွယ်တကူဖျက်ပြီး ကိုယ့်ဘက် ပါလာသူတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိ လက်တွဲသွားနိုင်ကြတာကို အံ့သြမိပါတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲ တခြားတစ်ယောက်က ဖျားယောင် သွေးဆောင်လာရင်လည်း ခုလိုပဲ အလွယ်တကူ ဖောက်ပြန်သွားမှာ မျိုးတွေကို မတွေးမိ၊ မစိုးရိမ်မိ၊ မကြောက်မိကြဖူးလား မသိဘူး။
တခြားသူတွေ အတွက်တော့မသိဘူး၊ ကျွန်မ အတွက်ကတော့ တခုခုဆို အလွယ်တကူနဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်သူတွေကို ယုံကြည်မှုထားဖို့ ဆိုမျိုးဟာ အတွေးထဲမှာတောင် အတော်ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 8/16/2007 05:11:00 PM3comments
ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီကဗျာကို လိုက်ရှာကြည့်တော့ Version နှစ်ခု ရှိနေတာ တွေ့ ရတယ်။ ပထမဆုံး အပိုဒ်မှာ ကွဲလွဲတာပါ။ ( How happy he, who free from care .. The rage of courts, and noise of towns; ..Contented breathes his native air, ..In his own grounds.) နဲ့(Happy the man, whose wish and care ..A few paternal acres bound, Content to breathe his native air, In his own ground) ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်ဟာ မှန်သလဲ တော့ မသိဘူး။ ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ Version ကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/14/2007 02:11:00 PM0comments
မြ ရဲ့ လ - ဂျူး
ဂျူး - မြ ရဲ့ လ (PDF)
Credit to N3 for PDF
Posted by Nay Nay Naing at 8/14/2007 08:11:00 AM0comments
တနင်္လာနေ့... (13 August 2007)
အလုပ်အားတဲ့ ရက်တွေမှာ တခြား အလုပ်ရှုပ်၊ စိတ်တွေရှုပ်၊ အိပ်ရေးပျက်တာများနေတော့ မနက်နိုးလာတဲ့ အခ်ျိန်မှာ မကြည်လင်ဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်။အလုပ်အသွား အမ်အာတီရောက်မှ အိမ်မှ ဖုန်းကျန်ခဲ့တာ သိလိုက်ရတယ်။ယူရမယ့် ပစ္စည်းတွေ တော်ရုံနဲ့ ကျန်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်လေ့မရှိဘူး။ဒီတခါမေ့တာ နှစ်နှစ် အတွင်းဆို ဒုတိယအကြိမ်လို့ပြောရမယ်။
အလုပ်ရောက်တော့ လုပ်စရာတွေ အရမ်းများနေတယ်။ အားလပ်ရက်များများရတာ မကောင်းပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ မနက်ပိုင်း အလုပ်ကြွေးတွေ ပြီးအောင်လုပ်မယ် စိတ်ကူးပြီး လုပ်နေလိုက်တော့ မနက်ပိုင်း ရနေကျ အင်တာနက်ပေါ် လျှောက်ကြည့်ချိန်လေးတောင် မရလိုက်ဘူး။ ၁၂ နာရီ ထမင်းစားချိန်မှာတော့ အလုပ်တွေ အတော်ရှင်းသွားတယ်။
နေ့ လယ် ၂း၃၀ နာရီမှာ Urgent UAT Deployment ရှိတယ်ဆိုတာကြောင့် ထမင်းအမြန်စားပြီး ပြင်ဆင်စရာတွေ အမြန်ပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်။ အချိန်မှီ ပို့ စရာရှိတဲ့ Document တွေ ပို့ ပြီး ညနေ SIT Deployment အတွက် အလုပ်ပြန်စလုပ်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ ရဲ့ Share Document တွေထားတဲ့ Server တစ်လုံးကို Restart လုပ်မယ် အဲဒီ Server ကို Access လုပ်တာ ရပ်ထားပါဆိုတဲ့ Instruction ၀င်လာတယ်။ အချိန်မှီအောင် အသည်းအသန် လုပ်နေရတဲ့ အထဲ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ မေးကြည့်တော့ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာမယ်လို့ ပြောတယ်။ဒါနဲ့တခြား လုပ်စရာတွေ လုပ်ရင်း စောင့်နေတာ Server က ပြန်တတ် မလာတော့ပါဘူး။ သူလည်း ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်နေရတာ ပင်ပန်းလို့အနားယူသွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့SIT ကို Document တွေမရှိပဲ ရှိတာတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင် လုပ်လိုက်တယ်။
၁ နာရီကျော်ကြာတဲ့ အထိ Server ကို Access လုပ်မရလို့ဖုန်းဆက်မေးမှ HD Crash ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ Share Document တွေ အားလုံးက အဲဒီမှာ။ ခုနက Release လုပ်လိုက်တဲ့ UAT ကို Deploy လုပ်ပြီးပြီဆိုတာ အကြောင်းကြားတဲ့ အီးမေး ၀င်လာလို့စိတ်ညစ်တာတွေ မေ့ထားပြီး UAT Tester တွေစီ Announcment မလုပ်ခင် တခါစမ်းကြည့်ဖို့ လိုတော့ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ UAT Site က Login တောင်လုပ်မရပဲ၊ Error တတ်နေတာတွေ့ လိုက် ရတယ်.. ဒါနဲ့Urgent Announcement ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ UAT Site ကို မသုံးပါနဲ့Software တွေကို Update မလုပ်ပါနဲ့အီးမေးအမြန်ပို့ ပြီး အကြောင်းကြား။ Deployment Error လား။ File တွေ ကျန်လို့Error တတ်တာလား၊ တခြား Security Checking လုပ်တာကြောင့်တွေလား၊ ကိုယ်က ကြားခံလို ဖြစ်နေတော့ ဘယ်သူ့ ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သေချာသိမှ ဖြေရှင်းခိုင်းလို့ ရမှာမို့ လို Log Files တွေ လိုက်ဖတ်ရ၊ ဖုန်းတွေ ဆက်မေးလုပ်ရတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ Module တစ်ခုမှာ File တွေ ကျန်တာမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်း Developement လုပ်တဲ့သူတွေစီ အမြန်ဖုန်းဆက်ပြီး Confirm လုပ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်။ ခုလ ၁ လစာနဲ့ မလုံလောက်ဘူး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ လပိုင်းက သူတို့File တွေကို အစီအစဉ် အတိုင်းပြန်ပြီး Deploy လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရင် Ok သွားနိုင်ပါမယ်တဲ့လေ။ ပြောတော့သာ လွယ်တာ ကျွန်မမှာ အရင် Document တွေပြန်ရှာရမှာ မလွယ်ဘူး။
သူတို့ အမှားကို အပြစ်တင်နေဖို့ အချိန်မဟုတ်တာကြောင့် ( ကျွန်မပြောစရာမလိုအောင် သူတို့ ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကို နားထောင်မယ့်သူတွေက စောင့်နေပြီလေ) ခုတက်နေတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နောက်ထပ် UAT Package တစ်ခု ပို့ ဖို့ ကြိုးစားရတယ်။ ပုံမှန်ဆို Documentation Server HD Crash ဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး။ Backup ရှိလား လိုက်မေးတော့ ဒီနှစ်လ မအားလို့Backup မလုပ်ထားကြဘူးတဲ့။ Project Manager ကို Report လုပ်ပြီး၊ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာမှာ ရှာကြည့်တော့ တချို့Doucment တွေရှိနေတယ်။ ဒါတွေသုံးပြီး Data Server က File တွေကို ပြန်ရှာပြီး ပြင်ဆင် အမြန်ပို့ ရတယ်။ Documentation Share Serverပဲ မရတာဖြစ်ပြီ၊ တခြား Share Server တွေအကုန်သုံးလို့ရနေလို့တော်သေးတယ် ဆိုရမယ်။
UAT ကို ၅း၃၀ ကျော်ရင် မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့TNS Department က ဖုန်းဆက်တယ်။ ဒါနဲ့အမြန်လုပ်တာ ၅း၁၅ မှာပြီးသွားတယ်။ UAT Deployment လုပ်ခိုင်းရင် Package ကို dimensions မှာအရင် Upload လုပ်ပြီးမှ၊ Upload လုပ်ထားတဲ့ နေရာရယ်၊ ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Instruction တွေကို RSA Tracking System သုံးပို့ ရမှာမို့Dimensions ကိုဝင်တော့ ကျွန်မ User Name နဲ့Password က၀င်မရဘူး။ ခုနက တခါလုပ်တုန်းက ရတယ်၊ ခုမရတော့ဘူးဆိုတော့ ရှိသမျှလူ တွေ လိုက်စမ်းခိုင်းတော့ သူတို့ လည်း ၀င်လို့ မရဘူးတဲ့။ ဒီနေ့မရှင်းရင် မပြီးတာနဲ့Package ကို Thumb Drive ထဲထည့်ပြီး၊ TNS Department ကို ပြေးရတယ်။ ဟိုကိုရောက်တော့ ၅း၃၀ ရှိနေပြီ။ ကျွန်မကိုမြင်တော့ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုံတွေနဲ့ ။ သူတို့ အလွန်လို့ လည်း ပြောလို့ မရဘူး၊ သူတို့ မှာလည်း လုပ်စရာတွေက အများကြီးကို။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ကျွန်မကလည်း ကိုယ်လိုချင်တာ အတွက် မျက်နှာချိုသွေး ပြုံးပြရတော့တာပေါ့။ သူတို့ ကို Dimensions သုံးမရလို့ပို့ လို့မရဘူး ဆိုတော့ မယုံဘူး။ ၀င်ကြည့်ပါဆိုမှ သူ့ User Account နဲ့ ဝင်တယ်။ ၀င်မရတော့ ဒါဆို သူတို့ဘယ်က File တွေသွားယူရမှာလည်း၊ လုပ်ပေးလို့ မရပါဘူးတဲ့။ ရတယ်။ ငါ ဒီမှာ Copy ကူးလာတယ်၊ ဒါကို သုံးပြီး လုပ်ပေးပါလို့ ပြောလိုက်ရတယ်။ :D အတော်လေး စိတ်ဆိုးသွားပုံ ရပါတယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရှေ့မှာတင် Deployment လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာကနေ သူတို့ ကို လုပ်ခိုင်းတာတွေ ကျွန်မကိုယ်တိုင် လုပ်လိုက်နိုင်ပေမယ့် UAT ကို TNS Department ကသာ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Rules ကြောင့် ခုလို လုပ်ခိုင်းနေရတာပါ။
နောက်ဆုံး ၆ နာရီမှာ UAT အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ UAT user တွေကို အီးမေးပို့ ၊ ဖုန်းတွေဆက်ပြီး Testing လုပ်နိုင်ပါပြီးဆိုတာ ပြောတယ်။ အိမ်ပြန်လို့ မရသေးပါဘူး။ တခြား သူတွေ Release လုပ်ထားတာတွေကို SIT မှာ Deploy လုပ်ပေးရဦးမယ်။ မနက်ဖြန်အတွက် UAT package ပြင်ဆင်ပေးရပါဦးမယ်။ ကျွန်မကို တာဝန်ပေးထားတဲ့ RSA တစ်ခုကို ရှင်းဖို့Program ရေးရဦးမယ်။ SIT Deployment နဲ့UAT Package ပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာ ည ၈ နာရီထိုးပြီး။ ညဘက် အခန်းကြည့်ဖို့ချိန်းထားတာတစ်ခုကလည်းရှိတာကို Cancel လုပ်လိုက်ရတယ်။ အရမ်းပင်ပန်းနေလို့Coding ရေးစရာကို နောက်နေ့ အားမှလုပ်မယ်စိတ်ကူးပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးထွက်လာတော့ ည ၉ နာရီထိုးတော့မယ်။
ထမင်းလည်းမစားချင်၊ အိမ်ရောက်ရင်လည်း ချက်စားဖို့ စိတ်မရှိတာကြောင့် ထမင်းဝယ်ပြီး အိမ်ကို တန်းပြန်လာ လိုက်တယ်။ အိမ်အောက်ရောက်တော့ မီးလောင်တာကျနေတာပဲ မီးခိုးတွေ အများကြီးတွေ့ ရတယ်။ အသီးတွေ၊ စားစရာတွေနဲ့ဖယောင်းတိုင်တွေ၊ စက္ကူတွေကို မီးတွေရှို့ ထားတာတွေ့ အများကြီးပါပဲ။ ဒီတော့မှ တရုတ်တွေရဲ့ တစေကြီးလ၊ တမလွန်ဘ၀က လူတွေစီ ပစ္စည်းတွေကို မီးရှို့ ပြီး ဟွန်ဒီလွှဲတဲ့လ ရောက်ပြီဆိုတာ သတိထားမိ လိုက်တယ်။ ဓာတ်လှေကားနား ရောက်တော့ ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ စားပွဲကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ လိုက်ရတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ ဘဲကောင်လုံးကင်တွေ၊ အစားအစာမျိုးစုံ၊ အသီးမျိုးစုံနဲ့ဖယောင်းတိုင် အကြီးကြီးတွေ ထွန်းထားတာ၊ ရှို့ ထားတဲ့ စက္ကူတွေကလည်းအများကြီးပဲ... နမျောစရာကြီးလို့ တွေးမိတယ်။ ညှော်နံ့ တွေကလည်း ဆိုးရွားလိုက်တာ။ အိမ်ထဲရောက်တဲ့ အထိ ညှော်နံ့ တွေရနေတုန်းပဲ။
အင်း... တကယ်ကို အဆင်မပြေတာတွေများတဲ့နေ့ တစ်နေ့ ပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 8/14/2007 08:10:00 AM4comments
ဦးသန့် အရေးအခင်း၏ သမိုင်းတပိုင်းတစ
ဟိုရက်ပိုင်းက ဦးသန့် အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ငှါးဖတ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ဆိုတော့ ဦးသန့် အရေးအခင်းကြောင်းတော့ မပါဝင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး အရင်တုန်းက ကျွန်မ မသိသေးတဲ့ ဦးသန့် အကြာင်းတွေ ပိုသိပြီး၊ ပိုပြီး လေးစားမိတယ်။ ဒီနေ့ဦးသန့် အရေးအခင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖတ်မိပါတယ်။
ကျတော်သိသော ဦးသန့် အရေးအခင်း
Posted by Nay Nay Naing at 8/13/2007 11:59:00 AM2comments
Papaya and I
ခုတလော ချူချာတာများနေတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် အသီးအနှံများများ စားရမယ်၊ ဒီနိုင်ငံမှာ လွယ်လွယ်ရတဲ့ သင်္ဘောသီးလေး စားပါလားဆို တဲ့ မေမေ့စကားကြောင့် ခုတလော သင်္ဘောသီးစားဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ လယ်စား စားပြီးတိုင်း သင်္ဘောသီး တစ်စိတ်နဲ့နာနတ်သီး တစ်စိတ်လောက် အနည်းဆုံး စားဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး စားနေရပါတယ်။
ရန်ကုန် အိမ်မှာနေတုန်းကဆို ကျွန်မ လုံးဝနီးပါး မစားတဲ့ အသီးတွေထဲမှာ သင်္ဘောသီးလည်း ပါတယ်။ ကျွန်မ တစ်ယောက်ကလွဲရင် တစ်အိမ်သားလုံး သင်္ဘောသီး စားကြတယ်။ တခြားအသီးအနှံတွေလည်း စားကြပါတယ်။ ကျွန်မကို မေမေက နည်းနည်းလောက် စားကြည့်လိုက်ပါ၊ တစိတ်လောက်လေး စားကြည့်ပါ၊ အရမ်း ချိုတယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်၊ ဘာတွေ ဘယ်လောက် ပြောပြော သင်္ဘောသီး စားဖို့ ကို အမြဲငြင်းနေခဲ့တယ်။ တခါတလေ ဘေးနားလာပြီး တတွတ်တွတ်ပြောလွန်း၊ အတင်းလာခွံကျွေးနေမှသာ မေမေ စိတ်ကျေနပ်အောင် နည်းနည်းလောက် စားဖြစ်တတ်တယ်။ ကျွန်မ ဘာကြောင့် သင်္ဘောသီး မစားတာလဲ၊ အရသာ မကြိုက်လို့မစားတာလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်၊ စားချင်စိတ်မရှိလို့မစား ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အခု ဒီမှာ စားဖြစ်တော့မှ၊ ဒီက သင်္ဘောသီးတွေ အရသာမရှိမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ အသီးတွေကတော့ ကြီးပါရဲ့၊ လှပါရဲ့ ဒါပေမယ့် အရသာ မရှိတာက များနေတယ်။ ဒီက အရသာသိပ်မရှိတဲ့ သင်္ဘောသီး လှလှကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း၊ ရန်ကုန်အိမ်မှာ သင်္ဘောသီးဝယ်တိုင်း အသီးလှလှ အလုံးကြီးကြီး ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ စိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုး ဆိုတာတွေထက် စာရင်၊ အလုံးသေးသေး ပိန်ညောင်ညောင် သဘာဝအတိုင်း သီးတာပါလို့ ပြောရောင်းတဲ့ မြန်မာမျိုးဆိုတဲ့ အသီးတွေကို မေမေလိုက်ရှာပြီး ၀ယ်တတ်တာကို သတိရမိတယ်။ ကျွန်မတို့ အမေက ဘယ်ကိုပဲသွားသွား လမ်းမှာ သူလိုချင်တဲ့ သစ်သီးရောင်းနေတဲ့ ဆိုင်တွေတွေ့ ရင် ကားရပ်ခိုင်းပြီး ဆင်းဝယ်တတ်တယ်။ အဲ့ဒီလို ၀ယ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ တွေက အမြဲပူညံပူညံ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ပူညံပူညံသာ လုပ်ကြတာပါ၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း အမေ၀ယ်လာတဲ့ သစ်သီးတွေကို အားလုံး ၀ိုင်းပြီး ကုန်အောင် စားကြတာပါပဲ။
ကျွန်မတို့ခြံထဲမှာလည်း စိုက်လေ့ရှိတဲ့ အပင်တွေထဲမှာ သင်္ဘောသီးပင်တွေ လည်းပါတယ်။ ခြံထဲမှာ အနည်းဆုံး သင်္ဘောသီးပင် ၃၊ ၄ ပင်တော့ ရှိနေ တတ်တယ်။ အိမ်မှာ သီးတဲ့ အသီးတွေက အသီးသိပ်မကြီးပေမယ့် အရမ်းချိုတယ်လို့အမေပြောတာ အမြဲကြားနေခဲ့ဖူးတယ်။ အသီးတွေကို အပင်မှာပဲ အမှည့်ခံပြီး စားလေ့ရှိတာကြောင့် ပင်မှည့်သီးမို့ များ သာမန်ထက် ပိုချိုနေတာလားတော့ ကျွန်မ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ တချို့ အပင်တွေဆို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပြွတ်သိပ်နေအောင် သီးလေ့ရှိတာကို ပြန်ပြီး မြင်ရောင်မိတယ်။ အမေက နွေရာသီမှာ သီးတဲ့အသီးတွေက မိုးရာသီမှာသီးတဲ့ အသီးတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် အလုံးသေးပေမယ့် ပိုချိုတတ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မိုးရာသီမှာ ရေများမျာရလို့အသီးတွေ အချိုပေါ့တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တခါတလေ မိုးတွင်းဆို မိုးအရမ်းများရင် သင်္ဘောပင်တွေ ပုတ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မိုးတွင်းဆို ခရုတွေတတ်ပြီး အသီးတွေသာမက အပင်တွေပါ ပုတ်ကုန်တတ်လို့အမြဲသတိထားပြီး ခွါချရတယ်။ မိုးရာသီဆို ရန်ကုန်မှာ အရမ်းပေါတဲ့ ၊ တိုင်တွေ အပင်တွေပေါ်မှာ တတ်နေတတ်တဲ့ အဲ့ဒီ ခရုကြီးတွေကို အရမ်းရွံပါတယ်။
သင်္ဘောသီးပင်မှာ အဖိုပင်နဲ့အမပင်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတာကို အမှတ်ရမိတယ်။ တကယ်ဆို သင်္ဘောအမပင်ကသာ အပွင့်ကြီးကြီးနဲ့ တစ်ပွင့်ခြင်း ပင်စည်မှာကပ်ပွင့်ပြီး အသီးသီးတာပါ။ အဖိုပင်က အပွင့်သေးသေးနဲ့အခိုင်လိုက် ပွင့်ပြီး အသီးတော့ မတင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ နဲ့ရင်းနှီးသူ တချို့ ရဲ့ အိမ်တွေမှာဆို ပေါက်လာတဲ့ သင်္ဘောပင်က အဖိုပင်ဆိုရင် ကြီးလာတဲ့အထိ မထားဘူး၊ နှုတ်ပစ်တတ်ကြတယ်။ တချို့ ကလည်း အဖိုကို အသီးသီးတဲ့ အမပင်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလား၊ ပြောတာကြားဖူးတယ်။ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာမဟုတ်လို့ဘယ်လို လုပ်တာလည်း ဆိုတာကိုတော့ မှတ်မထားမိဘူး။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာတော့ ဖေဖေက သင်္ဘောပင်က အရွက်နုလေးတွေကို လက်ဖက်နဲ့ စားလေ့ရှိတာကြောင့် အဖိုပင်ဆိုလည်း နှုတ်မပစ်ပဲ စိုက်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဖေဖေစားသလို ကျွန်မလည်း တခါလိုက် စားကြည့်ဖူးပါတယ်။ တခါပါပဲ၊ သင်္ဘောရွက်ဟာ ခါးတဲ့အရာသာရှိပြီ့း ကျွန်မကလည်း အခါး မကြိုက်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းတော့ လုံးဝ မစားဖြစ်တော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး အိမ်က တချို့ လူတွေက သင်္ဘောအဖိုပင်က အပွင့်တွေကို ပြုတ်ပြီး သုတ်စား၊ အတို့အမြှုတ် အဖြစ် စားတာ တွေးဖူးတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ ကျွန်မ တခါမှ စားမကြည့်ဖူးဘူး။
သင်္ဘောပင်နဲ့သင်္ဘောသီး အကြောင်းရေးနေရင်းကမှ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ တခြားအိမ်တွေမှာလို သင်္ဘောသီး အစိမ်းသုတ်တို့ ၊ သင်္ဘောသီးထောင်းတို့ လုပ်စားလေ့မရှိကြဘဲ သင်္ဘောသီး အမှည့်ကိုသာ စားလေ့ရှိကြောင်း သတိထားမိလိုက်တယ်။ အိမ်မှာစားလေ့သာ မရှိတာ၊ ဖေဖေကတော့ သူငယ်ငယ်က စားလေ့ရှိတဲ့၊ စားခဲ့ရတဲ့ တောင်တွင်းကြီးက သင်္ဘောသီးသုတ်ဟာ အရမ်းကောင်းကြောင်းကို တိုက်ဆိုင်တိုင်း ပြောနေတတ်တယ်။ ဖေဖေပြောသလို တကယ်များ ကောင်းနေမလားဆိုပြီး တောင်တွင်းကြီးရောက်တိုင်း စားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီက သင်္ဘောသီးသုတ်ကို တစ်ဇွန်း၊ နှစ်ဇွန်းထက်ပိုပြီး မစားနိုင်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံကို ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ထိုင်းအစားအစာ သွားစားဖြစ်တဲ့ အခါတွေမှာ သင်္ဘောသီးသုတ်နဲ့တုန့်ရမ်းဟင်းကို တခါတလေ မှာစားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားကျင့်မရှိလို့ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်၊ လူတွေ တော်တော်များများက ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ချိုသလိုလို၊ စပ်သလိုလို ထိုင်းသင်္ဘောသီးသုတ်ကို ကြုံရင် စားလိုက်ပေမယ့် အရမ်း စားချင်လိုက်တာဆိုပြီး တမ်းတမ်းတတ ဖြစ်နေရလောက်အောင်တော့ မကြိုက်မိဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 8/11/2007 04:09:00 PM5comments
Mary Win - Music
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး အမေရိကားမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး။ သူ့ ရဲ့ ဂီတ၊ သူ့ ရဲ့ သတင်း နဲ့သူအကြောင်းတွေကို [MaryWinMusic.com] မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Mary Win - BlackBerry Honey
Mary Win - Pretty Man
Mary Win - Highway
Mary Win - Little Thing
Credit to : TeKong
Labels: Music, Myanmar, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 8/10/2007 11:13:00 AM0comments
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ချစ်သူ။
ယနေ့မွေးနေ့ မှသည် ဘ၀ တသက်တာ တလျှောက်လုံး........
Posted by Nay Nay Naing at 8/08/2007 12:01:00 PM7comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေစောင်းမှာ သတင်းတွေလိုက်ဖတ်ရင်း အဲ့ဒီနေ့ မနက်က စာရေးဆရာ တာရာမင်းဝေ ဘ၀တပါး ကူးပြောင်းသွားကြောင်း သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ နောက်ပိုင်းခေတ်ပေါ်စာရေးဆရာတွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး နှစ်သက်မိတဲ့၊ ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်မို့စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ သူ့ အကြောင်း သတင်းတွေနဲ့ဝမ်းနည်းစကားသံတွေကို ရေးသားကြသလို၊ တာရာမင်းဝေရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ကဗျာတွေကို နေရာအနှံ့ မှာ မျှဝေနေကြတာကို တွေ့ ရတယ်။ တာရာမင်းဝေရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
တာရာမင်းဝေ ဘ၀နဲ့ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေကိုလည်း ကြိုက်ပေမယ့် ဒီနေ့မိုးမခမှာ အမှတ်တရ တင်ထားတဲ့ ရွှေဘုန်းလူ အမည်နဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ဒီကဗျာ နှစ်ပုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဒီလိုကဗျာတွေကို စာတွေကို သူ ဘယ်တော့မှ ထပ်ရေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ မိုးမခနဲ့ဒီကဗျာတွေ မျှဝေတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ တခြား ရွှေဘုန်းလူရဲ့ ကဗျာတွေ ကို ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
ငါ ရင်ကော့ပြီး လာခဲ့မယ်။ ။
ဒီ ကဗျာတင်ထားကြောင်း သတင်းပေးပြီး၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပြသူတစ်ယောက်ရဲ့ အသံတစ်ခုကို နားထောင်ပြီးတဲ့ အခါ၊ ကဗျာရွက်သံရဲ့ အရေးပါမှုကို သတိထားမိလိုက်ပြီးလိုက်တယ်။ ဒီလို မာန်ပါတဲ့ ကဗျာတွေကို စာတွေနဲ့ ရေးသား မျှဝေနေကြသလို၊ ကဗျာရွက်သံတွေကို နားဆင်နိုင်အောင် ထန်ကရိုင်းကျကျ ပီသရှင်းလင်းတဲ့ အသံရှင်တွေနဲ့ရွက်ဆို မျှဝေသူတွေရှိရင် ကောင်းမှာပဲ တမ်းတမိတယ်။
နောက်မိုးမခမှာ တင်ပေးထားတဲ့ ရွှေဘုန်းလူရဲ့ ကဗျာရှည် တစ်ပုဒ်ပါ။ "ကျောင်းဖွင့်ချိန်" လို့ အမည်ရတယ်။ လက်ရေးကဗျာကို Scan လုပ်ပြီး Picture ဖိုင်တွေနဲ့မျှဝေထားတာမို့သိမ်းထားချင်တာနဲ့ကျွန်မ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူထားလိုက်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ယူလိုက်တာကို မိုးမခက တာဝန်ရှိသူတွေ နားလည်ခွင့်ပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ [ ရွှေဘုန်းလူ - ကျောင်းဖွင့်ချိန်]
Poem Credit to MoeMaKha.com
တာရာမင်းဝေ ရဲ့ မိုးရေစက်များ သို့ 
တာရာမင်းဝေ သို့ အမှတ်တရ ကဗျာ
ရွှေဘုန်းလူး - ကျောင်းဖွင့်ချိန် (PDF) - Credit to Ma May
Posted by Nay Nay Naing at 8/07/2007 10:17:00 AM4comments
Poems By Aung San Su Kyi
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတဲ့ ကဗျာတွေ လိုက်ရှာဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ ကဗျာ ၃ ပုဒ်တွေ့ လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။
"Emerald cool we may be
In cupped hands. "
ငါတို့အေးမြရသော်လည်း..
ငါတို့ဖြစ်လိုက်ချင်ပါဘိ..
(မောင်သာယာ၏ "တော်လှန်ရေးဆိုတာ" မှ)
Posted by Nay Nay Naing at 8/05/2007 10:58:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/05/2007 10:57:00 PM0comments
(By Daw Aung San Su Kyi)
Posted by Nay Nay Naing at 8/05/2007 10:55:00 PM2comments
စနေနေ့မနက်စောစော နိုးလာတယ်။ အလုပ်ပိတ်ရက်မှ နောက်ကျမှထမယ် စိတ်ကူးပေမယ့် အကျင့်ပါနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကရယ် ၊ ဆူညံလှတဲ့ ငှက်သံတွေရယ်က ကျွန်မကို စောစောနိုးစေခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း စလုပ်တဲ့ အကျင့်က Idle ဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ သွားထိုင်မိတာပါပဲ။ အလုပ်သွားရတဲ့ ရက်တွေမှာ မဖတ်ဖြစ်တဲ့ သတင်းတွေကို သောကြာနေ့ ညဆို အတော်လေး ညနက်တဲ့အထိဖတ်လေ့ရှိပေမယ့် စနေနေ့ မနက်အထိ ဖတ်စရာတချို့ က ကျန်နေတတ်တုန်းပါပဲ။ စာဖတ်ရင်း အချိန်တွေကုန်သွားတာကို လူက သတိမထားမိပေမယ့် ခုတလေ မနက်စောစော အလုပ်သွားတိုင် မနက်စာစားဖြစ်လို့အကျင့်ပျက်နေတဲ့ ဗိုက်က ဆာလာတယ်။ ဘာစားစရာရှိလည်း စဉ်းစားတော့ ဘာမှမရှိဘူး။ အဲ့ဒီတော့မှ သတိထားမိတယ်၊ အိမ်မှာ ကျွန်မ ဘာမှမချက်ပဲ အပြင်မှာပဲ ၀ယ်စားဖြစ်နေတာ သတင်း ၃ ပတ် မကတော့ဘူး။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၁၀း၃၀။ ဒီအချိန်ဆို ဈေးသွားမယ်ဆို မှီသေးတယ်။ ချက်စားမလား၊ ၀ယ်စားမလား အမြန်တွေးလိုက်တယ်။ အိမ်မှာပဲ ဟင်းချက်စားဖို့ စိတ်ကူးရတာနဲ့အ၀တ်လည်းပြီး ကျွန်မတို့ အိမ်နားက Market ကိုသွားဖြစ်တယ်။ ဒီဈေးမှာ ဈေးဝယ်တာ ဒီနှစ်အတွင်းဆို ဒီအကြိမ်ဟာ ဒုတိယမြောက်လို့ ပြောရမယ်။ အရင်တုန်းကဆို ညနေ အလုပ်အပြန် MRT နားက NTUC မှာပဲ ဈေးဝယ်လာလေ့ရှိတာ။ Market မှာ ပစ္စည်းတွေ ဈေးပိုပေါတယ် ပြောကြပေမယ့် တော်ရုံမသွားဖြစ်ဘူး။
ဈေးအသွား လမ်းမှာ ဘာတွေဝယ်ရင်ကောင်းမလည်း တွေးနေမိပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ထုံးစံအတိုင်း စားနေကြတာတွေပဲ ၀ယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေခဲ့ပါတယ်။ အသားဆိုင်တွေရှေ့က မြန်မြန်ဖြတ်ပြီး ပင်လယ်ထွက် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ကျွန်မလိုတာ ရှိမရှိကိုပဲ လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ တွေ့ ပါတယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်၊ အကောင်ကြီးတွေ။ 1KG ကို S$9လို့ရေးထားတဲ့အတွက် ဈေးမေးနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ မဟုတ်ရင် သူတို့ က တရုတ်လို ပြောတာလည်း ကိုယ်ကနားမလည်၊ ကိုယ်ပြန်ပြောတာလည်း သူတို့ ကနားမလည်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ ကင်းသွားပြီ။ နောက်တစ်ဆိုင်မှာ ဈေးပိုပေါတယ်၊ 1KG ကို S$7 ဆိုပေမယ့် S$9 တန် အကောင်တွေက အတော်ကြီးလို့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုပဲ ပြန်သွားဝယ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ရှေ့ရပ်ပြီး လိုချင်တာကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ 1KG လားတဲ့။ No လို့ ပြောတော့ Half လားဆိုမှ Yes လုပ်လို ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီလိုတွေကြောင့် Market မှာဆို ၀က်သား၊ ကြက်သားနဲ့တစ်ကောင်လုံးဝယ်လို့ မရတဲ့ ငါးတွေကို ကျွန်မ ၀ယ်လေ့မရှိတာပါ။
နောက်အသီးအရွက်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေဘက်သွားပြီး လိုချင်တာတွေရှိမရှိ လျှောက်ကြည့်မိတယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အရွက်တွေ လတ်ဆတ်တာနဲ့ လိုချင်တဲ့ အသီးအရွက် ၃ မျိုးလောက်ဝယ်ပြီး ပေးလိုက်တော့ ဘယ်လောက်ကြလည်း ဆိုတာကို တရုတ်လိုပြောတယ်။ သူပြောတာ ကျွန်မ နားမလည်ပါဘူး။ ကိစ္စမရှိဘူး၊ အသင့်ကြိုထုတ်ထားတဲ့ S$10 တစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သေချာပါတယ်။ ကျွန်မ ၀ယ်တာ 10$ ဖိုးမကျော်ဘူးလေ။ ပြန်အမ်းတဲ့ငွေလေးယူပြီး တွက်ကြည့်မှ ကျွန်မ၀ယ်တာ 3$ ကျော်ကျော်လေးပဲကျတယ်။ နောက်တစ်ဆိုင်မှာ ကြက်သွန်သွားဝယ်တယ်။ ဟင်းချက်မယ်ဆိုတော့ ကြက်သွန်လိုတယ်လေ။ ဒါကတော့ ၀ယ်ရလွယ်ပါတယ်။ Market ထဲကဆိုင်တွေက ကြက်သွန်တို့ ၊ အားလူးတို့ ကို အထုတ်လေးတွေ ထုတ်ပြီးရောင်းတတ်တယ်။ တစ်ထုတ်ကို 1$ ပေးရတယ်။ အားလူးတစ်ထုတ်နဲ ကြက်သွန်တစ်ထုတ် ၀ယ်ခဲ့လိုက်တယ်။
ထမင်းစားပြီး တစ်ခုခုစားမယ် စိတ်ကူးလို့Market ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ Chinese Shop ကိုသွားဖြစ်တယ်။ သင်္ဘောသီး စားရမလား၊ မင်းဂွတ်သီးစားရင် ကောင်းမလား၊ ကြက်မောက်သီး စားရင်ကောင်းမလား အတော်ကြာကြာ လျှောက်ကြည့် ဖြစ်တယ်။ အစိမ်းရောင် ကျွဲကောသီးကြီးတွေကို မြင်တော့ အမေ့ကို သတိရမိလိုက်သေးတယ်။ အချဉ်မကြိုက်တဲ့ အမေ့ကို ဆရာဝန်က အချဉ်ဓာတ်လိုတဲ့ ပြောတိုင်း ကျွဲကောသီးတွေ တစ်နေ့ တစ်လုံး အမြဲခွါကျွေးခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ ဘာသီးမှ စားချင်စိတ်မရှိတာကြောင့် ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး S$ 2:70 ပေးရတဲ့ Peach ဗူးကြီးတစ်ဗူး တစ်ဗူးပဲဝယ်ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ဆိုင်ထဲဝင်သွားတုန်းက ပူတင်းပဲစားတော့မယ် စိတ်ကူးပြီး ၀င်သွားတာပါ၊ ဒါပေမယ့် အာစောင့်နတ် ခရီးလွန်နေတယ် ထင်ပါတယ်၊ ကျွန်မစားနေကြပူတင်းက ကုန်နေတယ်တဲ့လေ။
အိမ်ပြန်လာပြီး ထမင်းချက်၊ ၀ယ်လာတာတွေ တ၀စားပြီး၊ စာဖတ်အုန်းမယ်ဆိုပြီး စာအုပ်လေးကိုင် ကုတင်ပေါ်တက် စာဖတ်လိုက်တာ ဘယ်လို အိပ်ပျော်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူး။ ကျွန်မ ပြန်နိုးလာချိန်ကြတော့ ညနေ ၅ နာရီကျော်နေပြီ။ ၀တ္ထုစာအုပ်မဟုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေဟာ အိပ်ဆေးတမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကား တကယ်မှန်တာပဲ။ ဒီနေ့အပြင်သွားမယ် စိတ်ကူးရှိနေခဲ့တော့ အမြန်ထ၊ ရေးချိုး ခေါင်းလျှော်ပြီး CityHall ဘက်သွားဖြစ်တယ်။ စာအုပ်အပ်၊ အသစ်ငှါးပြီးနောက် အိမ်ပြန်ချင်စိတ် မရှိသေးတာကြောင့် ဈေးဆိုင်တွေ လျှောက်ကြည့်ုဖြစ်တယ်။ CityHall မှာလည်း များလိုက်တဲ့ မြန်မာတွေ။ အရှေ့ မှာ ထိုင်နေတဲ့ သူတွေကလည်း အများကြီးပဲ။ အင်း အဲ့ဒီထဲက တချို့ က မြန်မာမှာလုပ်နေကြ ပုံစံတချို့ ကို ကျင့်သုံးကြတာတွေ့ ရတယ်။ ဒါတွေကြောင့် တချို့ ကောင်မလေးတွေ စနေ၊တနင်္ဂနွေဆို အဲ့ဒီကို တစ်ယောက်တည်း မသွားချင်ကြတာဖြစ်မယ်လို့တွေးမိသေးတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒီလိုပါပဲ။ ကိစ္စရှိရင် ဘယ်သူမှ မပါလည်း သွားလိုက်တာပါပဲ။ ဖိနပ်ဝယ်ရင်ကောင်းမယ် စိတ်ကူးပြီး လျှောက်ကြည့်ခဲ့ပေမယ့် ကြိုက်တာ မတွေ့ လို့ဘာမှမ၀ယ်ဖြစ်ဘူး။
နောက်တော့ ဆိုင်တွေကြည့်ရတာ ပျင်းလာပြီး၊ ဗိုက်လည်းသိပ်မဆာသေးတာနဲ့Esplanade ဘက်ကို လမ်းလျှောက် ဖြစ်တယ်။ အို.. များလိုက်တဲ့လူတွေ။ ညနေပိုင်းဆို အဲ့ဒီနေရာမှာ လူစည်လေ့ရှိတာသိပေမယ့် ၊ လူသိပ်မများဘူး ထင်လို့လမ်းလျှောက်မယ် စိတ်ကူးပြီး သွားလိုက်တာ။ နောက်မှ Singapore ရဲ့ National Day နီးလို့ပွဲတစ်ခုခု ရှိနေလို့ လူများနေတာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ တွေးလိုက်မိတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက အဲ့ဒီလိုပါပဲ။ ပွဲလေးတစ်ပွဲ ရှိတာနဲ့ရှိတဲ့နေရာကို လူတွေစုပြုံအုံခဲပြီး သွားကြတော့တာပဲ။ အခုဟာက National Day ဆိုတော့ ပိုဆိုးတော့မယ်ပေါ့။ Stage Show စင်တခုကိုလည်း တွေ့ လိုက် ရတယ်။ ဆူညံနေတဲ့ သီချင်းသံတွေကြားမှာ မြူးတူးခုန်ပေါက်နေသူတွေကိုလည်း တွေ့ ရတယ်။ လုံခြုံရေး တွေလည်း အများအပြား ရှိနေတာကြောင့် မထူးပါဘူးဆိုပြီး လူကြားထဲတိုးပြီး ရှေ့ ဆက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာမှ မရှိသေးတဲ့ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်နေတဲ့ လူတွေကြောင့် ခနနေ Fireworks လွှတ်မှာမို့ လို့ လား ထင်လိုက်မိသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်မေးတော့ မသိဘူးတဲ့။ (ကျွန်မ ပြန်လာတဲ့အထိလည်း ဘာ Fireworks မှာ မတွေ့ ရပါဘူး။) ကျွန်မလည်း လူတွေကြားထဲ အရှေ့ အနောက် လျှောက်သွားကြည့် ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကို မသိတဲ့ လူတွေကြားထဲ လျှောက်သွားနေရတာ တမျိုးတော့ ပျော်စရာ အကောင်းသား။
နောက်ဆုံး လမ်းလျှောက်ရတာ ခြေထောက်ညောင်းလာမှ CityHall ဘက်ပြန်ပြီး KFC မှာ ဟာဝိုင်အီ ပီဇာ နဲ့ကြက်ကြော် စားဖြစ်တယ်။ အစကတော့ တမျိုးပဲ စားမလို့ ပဲါ။ နောက်တော့ နှစ်ခုလုံးစားချင်တာနဲ့နှစ်မျိုးလုံးကို မှာပြီး စားဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်က ည ၁၀ နာရီကျော်နေခဲ့ပြီ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိပေမယ့်၊ ဒီတစ်ပတ် စနေနေ့ ကို ဘယ်လို ကုန်ဆုံးခဲ့လည်းဆိုတာ ချရေးကြည့်လိုက်တာပါ။
မေ့သွားတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်မ အိမ်မှာ ချက်စားဖြစ်တာလေးတွေလည်း ထည့်ရေးဦးမှ ဖြစ်မယ်။ ဘာတွေ ချက်စားဖြစ်လည်း ဆိုတာကို ထည့်မရေးမိရင် ကျွန်မရဲ့ ဟိုအဝေးက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေမှာကို ကြိုသိနေတယ်။ ဒီနေ့ လည်စာကို ပုဇွန်ဆီပြန်ဟင်း၊ အားလူကြော်၊ ဘေဘီကိုက်လန်ကြော် တစ်ပန်းကန် နဲ့ ပဲ စားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နေ့ လည်စာ စားပြီး အစားပိတ်အနေနဲ့Peach4ခြမ်း လောက်ပဲ ထပ်စားဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/05/2007 11:58:00 AM0comments
Mac's new OS X gets UNIX 03 certification
Mac OS X Version 10.5 Leopard ဟာ Unix 03 Certification ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းတွေမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သတင်းကောင်း တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ Solaris 10 , HP-UX , IBM z/OS တွေဟာလည်း Unix Compliant ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ Unix 03 ( Single UNIX Specification Version 3) ဆိုတာ ဘာလဲ။ [UNIX® 03]
The Single UNIX Specification (SUS) is the collective name ofafamily of standards for computer operating systems to qualify for the name "Unix". The SUS is developed and maintained by the Austin Group, based on earlier work by the IEEE and The Open Group. [Wiki]
Unix Complaint ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Platform တစ်ခုမှာ ရေးထားတဲ့ Application တွေဟာ နောက် Platform တစ်ခုမှာ သုံးလို့ ရအောင်ဆို ပြင်ဆင်ရေးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ SUS လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကကို အဲ့ဒီလို ရေးသားထား ပါတယ်။ "The need for standardization arose because enterprises using computers wanted to be able to develop programs that could be used on the computer systems of different manufacturers without reimplementing the programs."
ဒီတော့ Mac OS X Leopard ဟာ Unix Platform ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ အားလုံးရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ပိုရလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ကျောင်းက Database Prof; တစ်ယောက်ဆို Mac ကိုပဲ အဓိကထားပြီး သုံးတာကို သတိထားမိခဲ့တယ်။ Rails Core team members တွေအားလုံးဟာ TextMate ကိုသုံးပြီး Mac OS X ပေါ်မှာ develop လုပ်ကြတာပါ။ နောက်ပြီး Java သမားတွေ အများစုကလည်း Mac ကို အဓိက သုံးကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ Java အတွက် လိုအပ်တာတွေ အကုန်လုံးကို Mac ပေါ်မှာ ရနေတယ်လေ။
ကျွန်မလည်း Mac ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ၀ယ်မယ်လို့စိတ်ကူးနေတာလည်း ကြာပါပြီ။ ခုထိတော့ မ၀ယ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ ကျွန်မ Unix-Like Platform ကို သဘောကျတာကလည်း Mac OS တွေကို စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ အချက် တစ်ချက်ပါပဲ။ ပြီးတော့ Mac တွေက လှလည်း လှတယ်လေ။ Mac is so sexy!!! မကြိုက်တဲ့ အချက်ကတော့ Mac က Windows ထက်တောင် ပိုပြီး proprietary ဖြစ်သေးတယ်။
Source : Leopard gets UNIX 03 certification - InfoWord
Related Links: Unix 03, Max OS X Leopad
Posted by Nay Nay Naing at 8/03/2007 01:30:00 PM0comments
မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်မိတယ်။ အားလုံးပဲ ယောင်လို့ တောင်မှ US က ရုပ်ရှင်ရုံတွေထဲမှာ ဇာတ်လမ်းလေး ကောင်းလို့ ဆိုပြီး ပါလာတဲ့ Camera တွေနဲ့Recording မလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့ ။ တခါတလေ ကိုယ်ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ် အသစ်ဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းက Camera လေး ကောင်းကြောင်း သူများတွေကို ပြချင်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ Recording လုပ်လိုက်တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဗမာတွေ အထူး သတိထားသင့်ပါတယ်။
Jhannet Sejas,a19 year old girl was immediately arrested by the police after she recordeda20 second clip from the movie “Transformers” that she wanted to show to her little brother. She now faces up toayear in jail anda$2,500 fine. [Full Story Here ]
ကြည့်ချင်ရင် သူများ တင်ပေးထားတာတွေ ဒေါင်းလုတ်ယူပြီး ကြည့်ကြပေါ့။ :D.. ဒါလည်း အဖမ်းခံရနိုင်ပေမယ့် အခွင့်အလမ်း ပိုနည်းမယ် ထင်တယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သွားကြည့်တာနဲ့DVD အခွေထွက်မှာ ၀ယ်ကြည့်၊ ငှါးကြည့်တာ ကတော့ ပိုက်ဆံကုန်ပေမယ့် စိတ်အချရဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်။ ဒါတောင် DVD ၀ယ်တဲ့အခါ Pirated တွေ ၀ယ်မိရင် အဖမ်းခံရနိုင်သေးတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/03/2007 10:34:00 AM 1 comments
Ajax Rain - The Script Library
Posted by Nay Nay Naing at 8/02/2007 12:38:00 PM4comments
၈လပိုင်း ၁ရက်နေ့ 
ဒီနေ့၁ ရက် ၈ လ ..
၈ လပိုင်းရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ မှာ မကြာခင်မှာ ကျရောက်တော့မယ့် ၈ လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ အကြောင်း တွေးမိရင်း ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် ရေးတဲ့ "သစ္စာ" ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ပြန်ဖတ်မိတယ်။
၈၈ အရေးတော်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ဗမာပြည် သတင်းဆိုဒ်တွေမှာ ဖတ်လာရတာ အတော်ကြာပြီ။ ဒီနှစ်ဆို ဘလော့တွေမှာပါ အဲ့ဒီ အကြောင်းရေးတာတွေ ဖတ်နေရပါပြီ။ သတင်းတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေ၊ ခံစားချက်တွေကတော့ အစုံပါပဲ။ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံဟာ ၈၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွါးခဲ့တာဆိုတော့ ခုလာမည့် ၈ ရက်နေ့ ဆို ၁၉ နှစ်ရှိပြီပေါ့ ။ ၁၉ နှစ်ဆိုတာ ဘာမှ မကြာလိုက်သလိုပါလားလို့ထင်ရပေမယ့်၊ တကယ်ဆို ၁၉ နှစ်ဆိုတဲ့ သက်တန်းဟာ အတော်ကြီးကို ကြာရှည်နေပြီ လို့ပြောရမယ်။ ဒီလာမယ့် ၁၉ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ဟာလည်း သူ့ အရင် နှစ်တွေကလိုပဲ ပြီးဆုံးသွားမှာလား။ ကိုယ်တိုင်တော့ ဘာမှလဲ ဘာမှလည်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိ၊ ကြိုးစားခြင်းမရှိပေမယ့်၊ အောင်မြင်မှုတွေရတာကိုတော့ မြင်ချင်သား..
တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ကိုယ့်လိုလူတွေကြီးပဲ များနေတယ် ထင်ပါတယ်။
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး အများအတွက် အသက်ပေးလှူသွားသူတွေနဲ့ဒီ ကဗျာထဲကလို သစ္စာဆိုဝင့်သူတွေကို အားကျ၊ အထင်ကြီး၊ လေးစားမိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ကား အမျိုးဂုဏ်မောက် သစ္စာဖောက်ဟု
အသင်တို့ ၏ မညွတ်ပြောင်းသော
Poem Credit to THKZ
Posted by Nay Nay Naing at 8/01/2007 11:25:00 PM2comments